October 12, 2021 - Channel Lover
October 12, 2021 by Channel Lover
ကံကောင်းစေနိုင်သည့် အိပ်မက် နိမိတ်လေးများ အိ မ်မက် အမျို;မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာ ဓက တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက် မျိုး တွေ မက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ filipinotimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နို့ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို မက်တာ မျိုးက … Read more
ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ…
အသုပျ သုပျတဲ့ အမြိုးသမီးက အသုပျကို နယျတဲ့အခါ လကျအိတျ မစှပျပဲ နယျတာ တှတေ့ော့ ” ခငျဗြားတို့ ဒီပုံစံ အတိုငျးသာ ဆကျပီး ရောငျးမယျ ဆိုရငျ ဒီမှာ ရောငျးခခြှငျ့ မပွုနိုငျပါဘူး ” ” ရှငျ .. ဘာဖွဈလို့လဲ ရှငျ ” ” ဟာ …. ဘာ ဖွဈရမှာလဲ ” ” ခငျဗြားတို့ အသုပျ နယျတာ လကျအိတျလညျး မစှပျဘူး ” ” ဒီလိုမြိုးတာ လူနာတှေ စားမိရငျ ရောဂါတှေ ပိုဆိုးတော့ မှာပေါ့ ” ” အဲ့တော့ ကမြတို့ ဘာလုပျရမလဲ ရှငျ ” ” အဲ့တော့ … Read more
ချောင်းဦး PDF ပါဗျ …. ….(ရုပ်သံကြည့်ရန်)
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည် ချောင်းဦး PDF ပါဗျ …. …. ချောင်းဦး PDF ပါဗျ …. …. ချောင်းဦး PDF ပါဗျ… ….. ဆိုတဲ့ စကား ကို ကျုပ်တို့ အသွေးထဲ အသားထဲ မှတ်ထားတယ်……. ဒါ လက်စားချေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းရေး အတွက် ကျုပ်တို့ ရဲ့ တေးသံ ပဲ …. #ချောင်းဦးPDFပါဗျ… ပထမတခါချောင်းဉီး PDF လို့အော်တဲ့ Video ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းမျက်ရည် ကျရတယ် ခုချောင်းဉီးPDFလို့ အော်သံကို ကြားရတာ ဝမ်းသာမျက်ရည်ကျရတယ် ဘေးကင်းကြပါစေ တစ်ယောက်မှ မထိမခိုက်ဘဲဘေးကင်းပါစေ unicode … Read more
ပြည်သူတွေကို မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ပြီ
လူတွေဟာ ဓမ္မကိုတန်ဘိုးမထားကြဘဲ ပုဂ္ဂလကိုသာ တန်ဘိုးထားနေကြတော့ ဆရာတော်ကြီးလဲ စိတ်ညစ်နေရပြီ” ကျုပ်ကို ဖူးရုံသက်သက်နဲ့ တရားမရနိုင်ပါဘူး … ပုံတောင်ပုံညာတောဘက်တုန်းကလဲ ကျုပ် အတိအလင်း ကြေညာပြီး မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒီသုံးနှစ်တော့ ကျုပ်အလုပ်ကို ကျုပ် ဖြောင့်အောင် လုပ်ပါရစေဆိုတာလေ။ဒါလဲ စကား နားမထောင်ကြပါဘူးဗျာ။နည်းမျိုးစုံနဲ့ လိုက်လာကြတာပါပဲ။ လိုက်လာလေ ပိုဆိုးလေဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျုပ်လဲ စကားနဲ့တွင်မက အလုပ်နဲ့ သက်သေ ပြခဲ့ပြီးပါပြီဗျာ။ အခု ဒီမဟာမြိုင်တောမှာလဲ ကျုပ် ဒီမူကိုပဲ ဆက်ကျင့်သုံးမှာပဲ။သုံးနှစ်တိတိ ဘယ်သူနဲ့မျှ မတွေ့ချင်ဘူးဗျာ။ ကျုပ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ ရှိနေသေးလို့ ဒီတရားအလုပ်ကို ဖြောင့်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျုပ်ပြောထားတဲ့ စကားကို နားထောင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တာပါ။ လူတွေကလည်းဗျာ။ နာမည်ကြားဖူးလို့ ပွဲကြည့်သလို ကြည့်ရအောင် လာတာမျိုး များပါတယ်ဗျာ။[ပညာလိုချင်လို့ ဓမ္မလိုချင်လို့ လာတဲ့လူ မရှိသလောက်ပါပဲ။] … Read more
လှောင်ပြောင်နေတဲ့သူတွေကို အဆဲတစ်လိုင်းနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မင်းအုပ်စိုး
ဟိုတနေ့တုန်းက မင်းအုပ်စိုးကိုသတိရပါ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာစုတစ်ခုရေးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ကြော်ငြာ ဆိုပေမယ့်လည်းဇာတ်လမ်ဇာတ်ညွှန်းဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်ကဗျာရေးတတ် စာရေးတတ်အယ်ဒီတာ ချုပ်လည်း လုပ်တတ်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေတော့လုပ်ငန်းကြော်ငြာကို ရိုးရိုးမရေးချင်တာမို့စာတစ်စောင်ပေ တစ်ဖွဲ့ရေးဖြစ်လိုက်တာပါ ကျွန်တော့် စာလေးကိုဖတ်ပြီးထုံးစံမပျက်ဝိုင်းဆဲကြဝိုင်းလှောင်ကြ ဝိုင်းဟားကြတဲ့လူတွေကလည်း သိန်းချီသန်းချီပေါ့ ဒီကောင်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်ချက်ကို တော့စောက်ဂရုက်ို မစိုက်တာမို့အထူးတလည် ဘာမှလည်းပြန်မရေးသလိုဘာတစ်ခုမှလည်း မတုန့်ပြန်ခဲ့ပါဘူ ဒီလူတန်းစားတွေက မလိုတမာစိတ်နဲ့ ဝိုင်းဆဲကြလေကျွန်တော့်လုပ်ငန်းလေး ကလူပိုသိလေ ပိုအောင်မြင်လေမို့ ဖာသည်မနဲ့ ဝရမ်းပြေး ညားပြီးတော့မွေးထားတဲ့ အဲဒီ့လူတန်းစားတွေက်ိုကျွန်တော့်ဖက်ကကျေးဇူးတောင် တင်နေမိတာပါဗျာ အခုဒီစာစုလေးကိုရေးတာကကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းလေးက်ို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက် ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲဒီ့လူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရေးဖြစ်တာပါ လူအတော်များများကမင်းအုပ်စိုးကိုသတိရပါဆိုတဲ့ စာစုလေးကို ဖတ်ပြီး အဲဒီ့လိုအလုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ တွေးပြီးအဲဒီ့အကောင့်ကို မင်းအုပ်စိုးရဲ့ အကောင့်အတုလို့ ထင်နေကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါမယ် မင်းအုပ်စိုးကို သတိရပါဆိုတဲ့စာစုလေးက်ို ရေးသားထားတဲ့ ဒီအကောင့်ဟာ မင်းအုပ်စိုးရဲ့အကောင့်အစစ်ဖြစ်သလို အဲဒီ့အလုပ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တကယ်လုပ်တာပါ … Read more
စစ်ကောင်စီ သံချပ်ကာအမြှောက်ကားနှင့် PDF တို့တိုက်ပွဲ(ရုပ်သံ)
ဒီပဲယင်းနယ်အဝင်တွင် စစ်ကောင်စီ သံချပ်ကာအမြှောက်ကား ၂ စီးနှင့် စစ်ကား ၃ စီးကို ဒေသခံ PDF မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကား ၁ စီး ထိခိုက်၊ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ် (ရုပ်/သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဘုတလင်မြို့မှ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ သံချပ်ကာအမြှောက်ကား ၂ စီးနှင့် စစ်ကား ၃ စီးပါ ယာဉ်တန်းအား ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ “ဒီပဲယင်းနယ်အဝင်မှာ မိုင်းဆွဲတာ စစ်ကား ၁ စီး ထိသွားတယ်၊ အကျအဆုံးတော့ မသိရဘူး၊ … Read more
ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ခလေးတစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရပြီး ရွာသားတွေ ဖမ်းဆီးခံရ
ကော့သောင်း လုံးဖောရွာတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မောင်သီဟအောင်ကို ပစ်သတ်ပြီး ကျေးရွာသား ၂ဝဦးကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးသွား ကော့သောင်းမြို့နယ် လုံးဖောကျေးရွာ ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ရော်ဘာအလုပ်ရုံတွင် ဖခင်နှင့် အတူအလုပ်ကူညီကိုင်နေသည့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မောင်သီဟအောင်ကို အောက်တိုဘာလ ၁ဝရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များက ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အလုပ်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကျေးရွာသား ၂ဝဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကို ပြောဆိုသည်။ ” ဖြစ်စဉ်အဓိကကတော့ ပျူစောထီး ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်စိန်နှင့် ဦးမောင်ရီတို့ပေါ့။ သူတို့က မောင်သီဟအောင်ရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့ ကိုလင်းထွန်းကို ဖမ်းဖို့ဆိုပြီး သတင်းပေးတာပေါ့။ ဖမ်းခိုင်းတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ပျူစောထီး ခေါင်းဆောင် … Read more
ချစ်သူကိုလွမ်းရတဲ့အကြောင်းလေး နဲ့ သူအဆင် မှ ပြေရဲ့လားလို့တွေးမိတဲ့အကြောင်းတွေကို သီချင်းပုံဖော်ပြီးရေးထားတာမို့ ဝေးနေရ တဲ့ချစ်သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ဆွေးလို့ ကောင်းမယ့် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း ထိမိလွန်းတာမို့ ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို သဘော ကျနေကြပါတယ်။ သီချင်းအေးအေးလေး တွေ နဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားထား နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုတစ် ယောက် ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ” SUNSHINE ” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့သီချင်းလေးကို MTV ရိုက် ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို အရင်ကနဲ့မတူဘဲ လိင်တူ ချစ်သူပုံစံလေး ပုံ ဖော်ဖန်တီး ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်လိမ္မော်သီးနဲ့ ရိုက်ကူး ထား တဲ့ ဒီ MTV လေးဟာ အမျိုးသမီးအချင်းချင်း ချစ်ကြတဲ့ Lesbian စုံတွဲပုံစံသရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး … Read more
အကယျြခြုပျကနြတေုနျးက ဟငျးသှားပို့တာ အစောငျ့ရဲလေးက တံခါးဖှငျ့မပေးဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ကိုရောရတာပေါ့။ မောငျလေးအဆငျပွလေား ဘာညာပေါ့။ အဆငျမပွပေါဘူး အမရယျတဲ့။ ဟယျ မပွရေငျ CDM လုပျလဆေိုတော့ မလုပျရဲဘူးအမတဲ့။ လုပျပါ ငါတာဝနျယူတယျဆိုတော့ အမဖုနျးနံပါတျပေးပါ့လားတဲ့။ ကိုယျလဲကွောကျကွောကျနဲ့ အရဲစှနျ့ပွီး ပေးလိုကျတာ။ တပတျလောကျနတေော့ ကလေးတယောကျက ဖုနျးဆကျလာတယျ။ ရဲတပျရငျး….. က ကလေးက ပွေးခငျြတယျအမ၊ လာချေါပေးပါတဲ့။ ဘယျမှာလဲဆိုတော့ ……… မှာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ မနကျအစော ၆:၀၀ အိမျကထှကျပွီး စခနျးပေါကျကနေ ကောကျတငျလာခဲ့တာ။ အဲ့ဒီမှာ တယောကျ။ နောကျ ၃ ယောကျက မိနျးပေါကျက တပျထဲမှာဆိုပဲ။ ဟယျ အဲ့ထဲတော့ ငါဝငျမချေါရဲဘူးဆိုတော့ ကနြျောတို့ ခဏနေ ပတျကငျးထှကျတော့မှာ၊ အပွငျရောကျတာနဲ့ မယောငျမလညျလုပျပွီး ထှကျခဲ့မယျ၊ အမလာချေါပေးပါတဲ့။ … Read more